TSY FAHALEMANA ANY RANOTSARA ATSIMO : 12 no maty, trano 487 may nodoran’ny dahalo | NewsMada
Ireo trano nodorana tany Ranotsara Atsimo
Tsy mandry fahalemana ny Kaominina Ranotsara Atsimo, ao anatin’ny distrikan’i Befotaka. Nodoran’ny dahalo ny tanàna miisa 21 ka trano miisa 487 no hotohoto tanteraka, raha 12 kosa, ny maty. Manampy ireo manararao-pahefana ny “Vazaha” na ny “zandary” any an-toerana…
Tany lavitra andriana! Izay no azo amintinana ny tsy fandriampahalemana any Ranotsara Atsimo, anatin’ny distrikan’i Befotaka, faritra Atsimo Atsinanana. 12 ireo olona maty, trano miisa 487 no kila tanteraka ary omby an-jatony, lasan’ny dahalo, nandritra ny volana desambra no ho mankaty. Niverina any an-toerana matetika ny asan-dahalo izay mafana tanteraka ao an-dRanotsara Atsimo tampon-tanàna. Nisy ny fidinana ifoton’ireo ekipan’ny “Grand dossier” tany an-toerana nanatanteraka fanadihadiana lalina. Nisy hatrany ny fijoroana vavolombelona notontosain’ireo mponina isaky ny fokontany, izay nandalovana tao anatin’ny Kaominina Ranotsara Atsimo. Anisan’izany ny tao amin’ny fokontany, Ambalantany Kaominina Ranotsara Atsimo. Ny desambra 2016 teo, notafihin’ny dahalo ny tanàna, trano 12 may, olona iray maty. Tsy vitan’ny nandoro tanàna ireo dahalo avy any Ambohangimasy fa naka ny fananana rehetra koa. Hatramin’ny vilia sy ny sotro lasan’ireo dahalo avokoa. Nahantra tao anatin’ny indray mipimaso ny vahoaka ao an-toerana. Ho an’ny fianakaviana iray nijoro vavolombelona, omby 12 ny azy ireo no lasan’ny dahalo, very ny vola mitentina 1500.000 ariary.
Tonga matetika ny dahalo
Ny 27 febroary 2017, niverina nanafika tao amin’ity Kaominina ity indray ny dahalo ary intelo miantoana izany. Vokany, valo ny avy amin’ny fokonolona tao Ranotsara Atsimo no namoy ny ainy ary iray tamin’izy ireo no azo sambo-belona, tamin’ireo mpanara-dia. Ireo mpampihatra ny kalony, very fanahy mbola velona amin’ny tsy fisian’ny fandriampahalemana intsony. Voatery nifampiraharaha tamin’ireo dahalo ny fokonolona namerenana ilay nataon’izy ireo takalon’aina, ka vola no tambin’izany. Nandritra ny 24 andro izy no takalonain’ny dahalo. Mihorohoro sy matahotra dahalo tanteraka ny mponina. Any an-tsaha izy ireo no matory ary tsy misy intsony izany zo maha olona izany.
Andriamanitra kely ny “Vazaha”
Manao ny ataony amin’ny fanjakazakana izany Remenabila izany tany an-toerana. Tazana tsy lavitra ao Ranotsara Atsimo rahateo ny misy an’i Esira sy Iabohazo, izay toerana nanateran-dRemenabila ny basy azony tamin’ireo zandary lavony, tamin’ny 2008. Mitohy hatrany ny tsy fandriampahalemana any an-toerana. Manoloana ny tsy fandraisana andraikitry ny zandary any Ranotsara Atsimo, misy koa ny fanaparam-pahefana ataon’ireo “Vazaha” na zandary, izay tsy atokisan’ny mponina intsony any an-toerana. Manao ny antsoina hoe firaisan-dina ireo zandary, izay mahavelon-taraina ireo mponina any Ranotsara Atsimo. Miseholany ny endriky ny tsy fanajana ny zon’olombelona, daroka avy amin’ny mpitandro filaminana manararao-pahefana, tonga hatramin’ny vely vodibasy, fandorana olona amin’ny “petrole”, izay tsy fantatra marina ny antony mahatonga azy ireo hanao fampijaliana tahaka izao. Tovolahy iray no niharan’izany ary efa ho herinandro maro, mbola eo am-pandriana satria may hatramin’ny mahalehilahy azy. Ankoatr’izay, teren’ny zandary hihavana amin’ireo mpandroba sy namono olona ny vahoaka voaroba, raha ny fanampim-panazavan’ireo nijoro vavolombelona. Ankehitriny, anaty ala no miaina ireo fokonolona sasany. Karohin’ireo zandary ary rahonany ho faty ireo fokonolona mandà azy ireo, amin’ny tsy fanekena mamitram-pihavanana amin’ireo dahalo.
Mandoa sazy 350.000 ariary
Mitsipozipozy ny fiainan’ny mponina amin’izao fotoana izao. Ny hafa velon-taraina satria ho lany taranaka noho ny famonoana ataon’ireo dahalo. Faharavana isaky ny fokontany izay diavina. Maro ny fokonolona no mitaraina amin’ny tokony handraisan’ny Fanjakana fepetra momba ny resaka asan-dahalo sy fanaparam-pahefana ataon’ny “Vazaha”. Ho an’ny tao amin’ny fokontany Bekininina, raim-pianakaviana iray miampy ny zanany lahy ao an-trano, mandoa sazy mitentina, 350.000 ariary isan-dahy ho an’ny “Vazaha”. Maromaro ireo nijoro vavolombelona izay tratran’io fandoavana sazy io ao an-toerana. Nanontaniana ireo zandary tao an-toerana momba io fitakiana vola io. Nodisoin’ireo mpitandro filaminana ny fisian’izany fakana vola izany. Nolazain’izy ireo fa olona manana tombontsoa hanala ireo mpitandro filaminana ao Ranotsara Atsimo no mitady sy manely io tsaho io. Nolazain’ireo zandary fa fihetsika fanaon’ireo olona atao hoe “dahalo ambony latabatra” no manely tsaho momba ny fakan’ny zandary vola io. Manao herisetra sy manampatra fahefana hatrany ireo “Vazaha” any Ranotsara Atsimo. Tonga hatramin’ny 5 tapitrisa ariary ny sazy ho an’ireo izay sendra azy ireo. Anisan’izany ny fijoroana vavolombelona nataona renim-pianakaviana nananotena, notakiana 2 tapitrisa ariary ary tsy nanana afa-tsy 4 hetsy ariary. Matahotra dahalo ny vahoaka any an-toerana, saingy mihorohoro lavitra amin’ny “Vazaha” koa izy ireo. Misy hatrany ny fijoroana vavolombelona isaky ny fokontany nandalovan’ny mpanao gazety tany an-toerana, momba ny fanaparam-pahefana tanterahin’ny “Vazaha”. Maty momoka ny kalogny nenti-nampandriana fahalemana any Ranotsara Atsimo. Aiza ny fandraisana andraikitra avy amin’ny fitondrana foibe?